China 40Khz Ultrasonic Nano Spray Device miaraka amina fanamorana hafanana avo roa heny fanamboarana sy fanamboarana ranon-javatra roa | Qianrong
40Khz Ultrasonic Nano Spray Device miaraka amina fanonerana matetika matetika
40K ultrasonic nano spraying dia teknolojia fanefitra tokana, izay fomba famafazana mifototra amin'ny teknolojia fantsom-bolo atomika. Raha ampitahaina amin'ny famafazana tsiranoka roa-pneumatika nentim-paharazana, ny famafazana ultrasonika atomika dia afaka mahazo fitoviana tsara kokoa, matevina manify manify ary avo lenta kokoa. Mandritra izany fotoana izany, satria azo esorina ny fantsom-panafody ultrasonic raha tsy misy ny faneren'ny rivotra, ny fampiasana ny famafazana ultrasonic dia mety hampihena be ny fiparitahan'ny loko mandritra ny fizotran'ny famafazana, ary hahatsapa ny tanjon'ny fitsitsiana loko. Ny tahan'ny fampiasana ny famafazana ultrasonic dia mihoatra ny in-4 noho ny fanasitranana ranoka roa nentim-paharazana.
Ny fantsom-panafody ultrasonika dia miasa amin'ny alàlan'ny fanovana ireo onjam-peo avo lenta ho lasa angovo mekanika, ary ny angovo mekanika dia afindra any anaty ranoka hiteraka onja mijoro. Ny ranon-javatra dia ampidirina amin'ny sehatry ny atomization amin'ny alàlan'ny nozera. Rehefa mandao ny veloma misy ny atomisiona ny tsiranoka dia vaky ho zavona mitete mitete mitete mikarona izy io, avy eo mahatratrarana atomisation.
Ny nozoma atomika ultrasonika dia vita amin'ny firaka titanium mahery vaika sy metaly fananana hafa, izay manome fanoherana simika tena tsara sy fananana akustika tena tsara. Ny singa elektrôaktifa dia voarakitra ao amin'ny trano voaisy tombo-kase izay miaro ny ampinga amin'ny fandotoana ivelany.
Fanamiana avo lenta: ny famafazana ultrasonic dia haitao avo lenta avo lenta avo lenta avoakan'ny indostria, ampiasaina amin'ny fitoviana avo lenta amin'ny mikraoba ambany sy ny sary nano.
Fitsitsiana ara-materialy sy fiarovana ny tontolo iainana: satria mora mifehy ny tsifotra haingam-pandeha ambany tsy misy tsindry ary milatsaka amin'ny substrate ny vongan-drano fa tsy miverina avy any anaty substrate, dia afaka miantoka fihenam-bidy lehibe amin'ny habetsaky ny famenoana tafahoatra, mamonjy fitaovana maro ary mampihena ny famoahana ny tontolo iainana. Ny tahan'ny fampiasana coating amin'ny ultrasonic spraying dia mihoatra ny 4 heny noho ny famafazana ranoka roa nentim-paharazana.
Fanaraha-maso avo lenta: Rehefa takiana ny tahan'ny mikoriana ambany dia ambany, ny noza no tena irina. Rehefa miato ny sombin-tsifotra dia manana tombony miavaka izy ireo. Amin'ny alàlan'ny vokatra ultrasonika an'ny nozongo dia mihazona mihantona ny zana-tsokajy mandritra ny fizotran'ny famafazana rehetra mba hahazoana antoka fa miparitaka ara-potoana kokoa ireo sombin-javatra miasa ao anaty sosona manify.
Fahombiazana sy fitehirizana angovo avo lenta: ny ranoka dia afindra amin'ny lohan'ny famafazana noho ny hery misintona azy na ny paompy misy tsindry ambany ary mahatratra ny atomisiona mitohy na miserana, tsy misy fanakanana, tsy misy akanjo, tsy misy tabataba, tsy misy tsindry, tsy misy faritra mihetsika, tsy ilaina ny rano mangatsiaka mandritra ny atomisation, ary ny fanjifana angovo ambany, tsotra ny fitaovana, ambany ny tahan'ny tsy fahombiazana, ny nozoro ultrasonic dia manana asa fanadiovan-tena ary maimaimpoana ny fikojakojana isan'andro.
Ampiasaina be dia be: ny fitaovana famafazana ultrasonic dia ampiasaina amin'ny sela solika, sela photovoltaic film manify, sarimihetsika manify amin'ny masoandro, sela solar perovskite, sela solar, fonosana graphene, sela photovoltaic silikonika, firakotra fitaratra, faritra elektrika ary indostria hafa. Ny tsimok'aretina dia azo ampiharina amin'ny vahaolana isan-karazany, maloto, ranon-javatra simika, ary ranon-menaka koa azo ozomina.
Previous: Teknolojia atomika fanodinana vovoka metaly ho an'ny vovoka tin amin'ny alàlan'ny Ultra Frequency High
Manaraka: Portable Ultrasonic transducer Impedance analyzer Fandrefesana fitaovana ho an'ny Parameter
Ireo singa ultrasonic core mitondra ny transducer 3 ...